Sida loo helo habab sahlan oo dib u habboon?
Waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay maqaaladahii hore ee ku saabsan muhiimada dhismaha isku xidhka ee naqshadeynta bogga. Backlinks ayaa muhiim u ah SEO sababtoo ah tirada isirrada kala duwan - waxay hagaajinayaan muuqaalka bogga bogga natiijada raadinta; Waxay kor u qaadaan awoodda shabakadda ee indhaha Google; waxay abuurayaan socodka joogtada ah ee gaadiidka websaydhka, iyo kor u qaadida sumcada domainka. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad abuurto xiriir xooggan oo xooggan si aad u sarayso gaadiidkaaga raadinta raadinta, waxaad u baahan tahay istaraatiijiyad fiican oo ku haboon oo kuu shaqeeya.
(2). Backlinks waa fikrad sahlan - marka xiriirrada qaar ka mid ah adiga, xiriirka dibadda waxaa loo tixgeliyaa sida backlink. Doorka muhiimka ah ee dhismaha xiriirka wuxuu ka ciyaaraa tayada qaabka isha oo ah halka uu isku xirayo. Mashiinka Raadinta wuxuu qiimeeyaa tayada dhabta ah ee tirada shuruudaha gaar ah oo ay ku jiraan awoodda domainka, tirada iyo tayada xidhiidhada dibedda ee tilmaamaya domainka, ku haboonaanta mowduuca ku xiran ilaha webka ee isku xiran, iyo sidoo kale. Haddii dhammaan shuruudahaasi muujiyaan natiijo waxtar leh, ilaha webka ayaa heli doona darajo sare.
Dabool kasta wuxuu siinayaa qadar xaddidan oo casiir ah oo ku salaysan sumcad, taariikhda, iyo awooda ee suuqa qaar. Sidaa awgeed, dhabarka danbe ee tayo sare leh ee PR 9 ama 10 ilaha websaydhku waxay ka fiicanyihiin dib-u-tayada hoose ee tayada websaydhka spammy affiliate kuwaas oo aan haysan wax qiimo ah dadka isticmaala.
Dhammaan wixii la sheegay, haddii aad rabto inaad kuhesho bogga natiijada raadinta Google, waxaad u baahan tahay inaad ka hesho bogag internetka sareeya oo tayo leh oo tayo leh.
Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonnaa dhawr siyaabood oo khibrad leh si aan si fudud dib ugu helno dib-u-eegis tayo leh. Rajo farsamooyinkan ayaa kaa caawin doona inaad kuxirto boggaaga shuruudaha raadintaada la beegsanayo. Sidaa daraadeed, bal aynu eegno farsamooyinka dhismaha ee isku xirnaanta.
Siyaabo sahlan oo laguugu soo celin karo boggaaga
adoo qoraya marqaatiyada tayada, waxaad heleysaa fursad aad ku kobcin kartid boggaga gadaashaada ee dhabarkaaga ah ee dib u habeyn dhab ah oo laga helo goobaha maktabadda. Mar kasta oo aad soo iibsato alaabo ama adeegyo u qalma creditka, waxaad ka tagi kartaa markhaati ah goobta goobta iibka. Imtixaannadu waxay badanaaba leeyihiin xiriir ay ku leeyihiin goobtaada si aad u xaqiijisid in markhaati-sameynta si caadi ah loo abuuray. Waxay kaa caawineysaa inaad dib u hesho dib-u-celin deg-deg ah goobtaada adoon kharashka bixin. Haddii ay ku dhejiyaan tixraac aad naftaada ku hayso markhaatifkaaga, waxaad si naxariis leh u waydiisan kartaa inay bedelaan xiriirka tooska ah.
Waxaad ka heli kartaa wicitaano badan oo RSS ah oo ku yaalla websaydhka oo u oggolaanaya dadka isticmaala barta kala duwan, mawduucyada, ama ilaha webka mawduucyo kala duwan. Waa fursad ku habboon shabakada internetka si aad u hesho dib u bilaash bilaash ah mid ka mid ah tusaalooyinkan. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad soo gudbiso raashinkaaga si aad u hesho buuggan. Waxaad samayn kartaa labadaba, ama si toos ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad si toos ah u sameyso, waxaad isticmaali kartaa barnaamij kaas oo la yiraahdo Submitter Fast Fast. Barnaamijkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ku soo gudbiso domainkaaga in ka badan 100 oo wicitaano RSS ah si toos ah, oo waqti badan iyo dadaal badan Source .